Umthandazo wangokuhlwa wabantwana Discover ➡ Discover online ▷ ➡️
Ukuba ufumanisa ukuba ufuna eyona mithandazo mihle yokusikelela abantwana bakho ebusuku, ukwindawo elungileyo. Ngexesha le umthandazo wangokuhlwa wabantwana Uya kuqaphela indlela olomelela ngayo ulwalamano kunye nabo; Ukongeza ekufezekiseni ubudlelwane obungcono kunye nabo, apha siza kukufundisa indlela yokufezekisa.
1 Uthini umthandazo wangokuhlwa wabantwana?
2 Izibonelelo zokuthandaza
3 Kutheni le nto abantwana kufuneka basikelelwe ngaphambi kokuba balale?
4 Yeyiphi indlela echanekileyo yokusikelela abantwana?
5 Ngaba ukusikelela abantwana bethu ngomthandazo kuyabakhusela?
6 Ubusuku bokuthandaza abantwana bethu
7 Ndiyabulela Thixo ngokuthanda abantwana bam
Uthini umthandazo wangokuhlwa wabantwana?
Eli gama linemvelaphi yalo kwigama elithi "prarthana" eliphuma kumagama amabini "u-pra" no "artha"; Oko kuthetha ukukhunga ngokunyanisekileyo, oko kukuthi, ukucela into kuThixo ngalo lonke ukholo lwethu ngokusuka emazantsi eentliziyo zethu.
Umthandazo uphethe uthotho lwezincedisi ukuze iviwe yiNkosi yethu njengothando; uxolo, imbeko kunye nokholo oluhamba nokuzinikela kwethu okukhulu ngokomoya.
Ukuthandaza kusizisela uthotho lwezibonelelo zombini kwingcinga nakwindlela yokuziphatha, esi sisiseko solwazi lwethu lokomoya; ukufumana ukukhuselwa nguThixo kuThixo.
Zonke iinkolo zithandaza kuThixo nokuba zibulele okanye zicele ukukhuselwa. Kwizihlobo zethu nakwimizuzu apho iingxaki zibonakala ngathi azinasisombululo; kwimeko yempilo okanye ukhuseleko lwabathandekayo bethu.
Uninzi lwabazali lubathandazela abantwana babo, ukuze uThixo abave kwaye iingelosi zibathethelele; ubakhokele kwindlela elungileyo kwaye ubagcine kubo bonke ububi, yiyo loo nto ukusikelela abantwana kuyinto eyenziwa ngabazali mihla le.
Ukuthandaza kusivumela ukuba sikhule ngakumbi ngokomoya, ukongeza ekunciphiseni i-ego kunye nokusenza sibe ngabantu abangcono abanokwazi ukunceda abanye ngalo lonke ixesha, kwaye oko kusinika uxolelo lwezono.
Kutheni le nto abantwana kufuneka basikelelwe ngaphambi kokuba balale?
Ukunika intsikelelo ebantwaneni bethu ngumzuzu okhethekileyo wosuku okoko oku kuthintela ububi ukuba busondele kubo, kukho iindlela ezahlukeneyo zokusikelela umntwana, nokuba kungenxa yokuba uyenza ngokobuqu okanye ngenxa yokuba umfundisi eyenza.
Olu hlobo lomthandazo luyakukunceda udale iqhina elikhethekileyo lokuncamathisela kuThixo, ukongeza ekubetheleleni kubo uthando kwiNkosi yethu, ukuze isebenze sikucebisa ukuba yonke imihla ngaphambi kokuba ulale ubeke abantwana bakho eNkosini. ukubakhusela kubo bonke ububi.
Unokuzibuza ukuba yintoni intsikelelo, kuba yinto elula kakhulu eyenziwayo ngexesha elifutshane. Konke okufuneka ukwenze kukuchaza amagama achanekileyo ngokucela ubukho beNkosi yethu; ukukhathalela ukukhusela abantwana bakho, enye indlela yokusikelela kukusebenzisa amanzi angcwele. Unokuba nomdla Umthandazo womntwana ongcwele.
Yeyiphi indlela echanekileyo yokusikelela abantwana?
Imithandazo yindlela yokusondela kuThixo ukucela ukukhuselwa kwaye sibasikelele abantwana bethu, kodwa kukho amanyathelo ekufuneka elandelwe ukusikelela ngendlela elungileyo. Kungenxa yoko le nto kufuneka wenze oku kulandelayo:
Vala amehlo akho
Joyina izandla zakho
Ukuqala umthandazo, kufuneka uqale ucele ukuxolelwa kwezono, emva koko kuya kufuneka unombulelo ngentsikelelo nganye oyifumeneyo; okokugqibela kuxa senza ezi zicelo zibalulekileyo kuThixo zizele lukholo.
Ngaba ukusikelela abantwana bethu ngomthandazo kuyabakhusela?
Ngokwenkolo, umthandazo sisiseko esisiseko sokufezekisa iinjongo zokufumana ukholo ngokugqibeleleyo, kuba ukwenza izikhungo ngendlela efanelekileyo kukunceda uzive unxibelelwano olwahlukileyo noThixo.
Kwimeko yemithandazo yokhuseleko yabantwana bethu, yeyona yona isetyenziswa kakhulu ngabazali, kuba banika ukhuseleko lwabo kwiNkosi yethu ukubakhusela kubo bonke ububi okanye inkampani embi ebaphambukisayo kwindlela elungileyo.
Ukuze imithandazo yethu ibe nefuthe elinqwenelekayo kufuneka siyenze ngokholo olukhulu, phantsi kwamandla kaThixo akukho nto inokwenzeka kuthi kwaye kufuneka sizazi izicelo zethu ukuze ziviwe.
Ubusuku bokuthandaza abantwana bethu
«Bawo waseZulwini, siyabulela ngokuba unguThixo wethu, owaziyo usapho lwethu luphela. Ngokuhlwanje ndicenga abantwana bam, ukuze xa besebhedini bacamngce ngawe, bacinge ngendlela obathanda nabakhusela ngayo.
Ndiyakubongoza, Thixo ongunaphakade, ukuba ubakhokele abantwana bam emini, ubafundise indlela ekufuneka beyilandele. Banike abahlobo abalungileyo ukuze babe luncedo kubo, kwaye nabantwana bam banokuba nefuthe kubomi babo.
Busuku ngabunye ndifuna ukubeka abantwana bam ezandleni zakho ezingcwele, uThixo ulungile kwaye ulungile, bakhuselekile kunye nawe. Nceda ukhusele nganye nganye xa ungena naxa uhamba emini nasebusuku.
Sonke siyaphumla, ungumkhuseli wethu, nkqu nakwiingcinga zethu. Susa lonke uloyiko, ukuze singoyiki ngomso, kwaye abantwana bam bafunde ukukuthemba, ndiyakucela ukuba undincede ndibabonise ukuba baxhomekeke njani kwinkathalelo yakho, ukuze babone ngomzekelo wam ukuba ndiyakuthemba.
Ndiyabulela Thixo ngokuthanda abantwana bam
«Ngokukhanya kubo. Bakhusele kubantu abakhohlakeleyo, abaneenjongo ezimbi, abanenkohliso, bakhulule kwimigibe, kumgibe wabazingeli, kubatshabalalisi nakubakhuthazi bobubi. Ngokuhlwanje ndiyabulela ngamandla osinika wona yonke imihla, ukuba abantwana bam basoloko bekubulela kuba uhlala unabo.
Enkosi Thixo ngokufundisa abantwana bam izinto ekufuneka bezazi ngathi njengabazali, ngootitshala besikolo, ngeenkokheli, ndiyakucela ukuba babe nakho ukumamela ingcebiso elungileyo, nokuba babe ngabagcini bomthetho kwaye balandele imithetho ukuze benze kakuhle.
Ndiyabulela kuThixo wosapho lwam, sincede ukuba sikukhangele kwaye sikukhonze ngovuyo, ukuze sibe nothando, umanyano, uxolo nokuba sincedane emakhayeni ethu.
Nkosi, sonke kule ntsapho siza kulala ngoxolo kuba usenza ukuba sihlale ngokuzithemba. Sigadwe ziingelosi namhlanje ebusuku kwaye rhoqo. Ndiyabulela Nkosi ngothando lwakho olungaka ebantwaneni bam nakwabanye abantu endibathandayo.